mid kamida maraakiibta ugu waaweyn somaliya oo qarka usaaran inuu ku quuso yemen | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka mid kamida maraakiibta ugu waaweyn somaliya oo qarka usaaran inuu ku quuso...
mid kamida maraakiibta ugu waaweyn somaliya oo qarka usaaran inuu ku quuso yemen
Mid ka mid ah Markabkii ugu weynaa Soomaaliya oo ku sugan xeebta magaalada Sanca ayaa qarka u saaran inuu dego, iyadoo ay socdaan howlaha lagula tacaalayo in aanu markabkaas quusin oo ay wadeen engineero iyo kabtanada maraakiibta.
Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee dalka Yemen Xuseen Xaaji Axmed ayaa sheegay inay qatar ku jirto Markabka, kadib markii uu duleelsamay, isla markaana ay biyo badan soo galeen, isagoo xusay in dhowrkii maalmood ay biyaha uga saarayeen matooro.
“Labadan maalmood waxaa la dagaalameynay oo lagu mashquulsanaa Markabka Cusmaan Geeddi Raagge oo ka mid ahaa maraakiibta ugu weyn Soomaaliya, biyo badan soo galeen, meelo badan ayuu ka duleelsamay, matoor ayaa keenay oo biyaha uga saareynay, balse biyaha soo galayay ayaa ka badnaa”ayuu yiri Xuseen Xaaji Axmed.
Qunsulka ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in Markabkaas la bad-baadiyo inta aanu quusin, isagoo xusay in hadii uu quuso qatar kale ay soo wajaheyso oo ah in lacag fara badan oo boqol jibaar ah lagu dalaco, kaasoo lagu saarayo markabka hadii uu quuso.
Ilaa afar Markab oo ka mid ahaa maraaakiibtii Soomaaliya laheyd ayaa ku xiran Dekeda Sanca muddo tobanaan sano ah, iyadoo maraakiibtan ay daxaleysteen, markii ay heli waayeen dayactir, sidoo kale waxaa tan iyo markii ay bur burtay dowladdii dhexe gacanta ku hayay Ganacsade Soomaaliyeed.
Maraakiibtan ayaa dhowaan lagu soo dalacday lacago fara badan, iyadoo shirkad laga leeyahay dalka Yemen ay ku hanjabtay inay la wareegi doonto hadii aan la siin lacag, waxaana dhowaan Maamulka Dekeda uu dalbaday in maraakiibtan laga fogeeyo Dekeda Sanca oo ay in muddo ah ku xirnaayeen.
Previous articleWafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray Baydhabo iyo banaan bax ka socda
Next articleDEG DEG: ku dhawaad sadex qarax oo xoogan ayaa kadhacay xaafada Eastleigh